एभिन्युज टेलिभिजनआकार तथा स्वरुप परिवर्तन गर्नसक्ने रोबट - एभिन्युज टेलिभिजन
22 Baishakh 2075 Saturday 8:04 am प्रतिकृया दिनुहोस
जापान । एउटा रोबटले के सम्म गर्न सक्ला ? मानिसले मानिसकै सहयोगका लागि उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाएको हरेक रोबटले अहिले नै मानिसको कल्पनाभन्दा बाहिरको काम गरिरहेको छ । अनि, भविष्यमा रोबटको उत्पादन र विकासको क्षेत्रमा हुने सुधार कहाँसम्म पुग्ला ?
सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रशंग हो, जापानको । जापानका वैज्ञानिकले आकार तथा स्वरुप परिवर्तन गर्नसक्ने रोबटको विकास गरेका छन् । यो रोबट निश्चित गतीमा दौडिन पनि सक्छ । लामो समयदेखि परिक्षणमा रहेको ‘रियल लाइफ ट्रान्सफर्मर’ प्रविधिको उक्त रोबट जापानी वैज्ञानिकले सफलतापूर्वक परिक्षण गरेका छन् ।
रोबट निर्माणमा संलग्न प्राविधिकहरुका अनुशार यसै साता सार्वजनिक गरिएको ३ दशमलब ७ मिटर अग्लो उक्त रोबोट ६० सेकेन्डभित्र स्पोर्टस् कारमा परिवर्तन हुन सक्ने क्षमता राख्दछ । बढीमा दुईजना मानिससमेत अटाउने यो रोबटलाई ‘जे डेट राइड’ नाम दिइएको छ । यसको गती भने अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको प्रतिकृयाहरु आएका छन् ।
‘जे डेट राइड’ले प्रतिघण्टा करिब सय मिटर मात्र चल्न सक्ने बताइएको छ । ब्रेव रोबोटिक्स कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकारी केनजी शिडाले आफुले बाल्यकालमा हेरेका सिनेमामा प्रयोग गरिएका रोबट चरित्रबाट प्रभावित भएर तिनीहरु जस्तै रोबट बनाएको बताएका छन् ।
रोयटर्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उनले बाल्यकालमा गरिएको परिकल्पनाले अहिले काम गरेको दाबी गरेका छन् । सन् २०१३ देखि नै काम शुरु गरिएको यो रोबटमा भर्खर मात्र सफलता प्राप्त भएको हो ।
सुरुमा यसको उचाई ३ दशमलब ५ फिटको मात्र बनाइएको थियो । सन् २०२० मा यो रोबटको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको भएपनि करिब दुई वर्ष अगाडी नै यसको निर्माण कार्य सकिएको हो । स्रोतका अनुसार यो कारलाई रिमोट र ड्राइभिङ सीट दुबैबाट नियन्त्रण गर्न सकिने बनाइएको छ ।